Anọ ngosi ihe mgbe ochie na Buenos Aires nke dị na | Akụkọ Njem
Umslọ ihe ngosi nka anọ dị na Buenos Aires
Mariela Carril | | Buenos Aires, Ihe ị ga-ahụ
A maara obodo a dị ka Eze Nwanyị ọlaọcha y Ọ bụ otu n'ime obodo ndị nwere nnukwu ndụ na ọdịbendị ọdịnala na South America. N'ihi mgbanwe ahụ bara uru maka ndị njem nleta na-eji euro ma ọ bụ dollar abịa, ruo oge ụfọdụ akụkụ a aghọwo nnukwu ebe njem nleta ka anyị wee nwee ike ịmalite ịchọpụta ụfọdụ n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ya kachasị mma na ebe nkiri.
El Lonlọ ihe nkiri nke Colon, nke Ebe ngosi nka nke Evita, nke Ebe a na-akwabata ebe ndị njem si mba ọzọ na Rolọ Barolo ha bụ ndị anyị họpụtara taa. Ihe nnọchianya nke obodo, kamakwa akụkọ ihe mere eme nke mba a pụrụ iche na South America.
2 Lonlọ ihe nkiri nke Colon
3 Ebe ngosi nka nke Evita
4 Ebe a na-akwabata ebe ndị njem si mba ọzọ
5 Rolọ Barolo
Buenos Aires nwere ihe dị iche iche nke na ọ bụghị obodo ukwu dị mkpa n'oge ọchịchị. Lima, nke dịkwa na ndịda, dị ezigbo mkpa na Spain karịa obodo ahụ dị anya ma daa ogbenye nke dị n'akụkụ Río de la Plata.
Mba ndị a nwere onwe ha na Spain na 1816, mgbe afọ isii nke nnupụisi na mgbanwe dị iche iche, ọ bụ ezie na narị afọ nke iri na itoolu bụ narị afọ nke gbagọrọ agbagọ na ihe atụ nke mba a ga-etolite. N'agbata narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX bụ ọnụ ọgụgụ kasị elu nke mmepụta ihe ubi wee si otu a mara ọgaranya mara mma, ndị mmadụ kwuru na ha "tụbara butter n'uko."
E nwere elites na itinye ego na mmepe nke obodo ha, United States bụ ikpe, na ndị ọzọ na-adịghị, dị ka ikpe nke Argentina. Na-enweghị itinye ego na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ dị nwute taa ọ na-echegbu onwe ya naanị maka ihe ubi ahụ na-amị iji ree mba ọzọ. Eziokwu bụ na afọ 200 nke nnwere onwe ya enyefela anyị ebe ngosi ndị a anyị ga-amata n'okpuru.
Lonlọ ihe nkiri nke Colon
Na 2008 o mere emume narị afọ mbụ nke ịdị adị. E guzobere ya na Mee 25, 1908 na opera Aida na ọrụ were ihe dị ka afọ iri abụọ. O nwere ndi nwere ulo oru ato na nke ikpeazu, onye Belgium onye Jules Dormal, bu onye biputara uzo French nke n’ahu taa na ochicho mma. Emechaa ọ bụ ụlọ eclectic ya na otutu okpuru ala na ntinye nke agbakwunyere na iri isii. Taa, ọ dị ihe dịka 60 puku mita anọ.
Ime ụlọ ahụ mara mma n'ụdị ịnyịnya: e nwere igbe ndị dị n’elu ụlọ nke atọ ugbua 2478 oche A na-agbakwunye ndị mmadụ 500 guzo. Ọmarịcha dome ahụ dị mita square 318 ma jiri ihe osise chọọ ya mma (na mbụ ha bụ Marcel Jambon mana na 30, dara njọ, ndị na-ese ihe bụ Raúl Soldi dochie ha).
¿Enwere ndị njem nleta nke a ga - enyere gị aka inwe ekele maka ihe ịtụnanya dị n’ime gị? N'ezie. Nleta ndị ahụ Ha nọ n’ìgwè na-erughị mmadụ iri atọ na anọ, kwa ụbọchị ma e wezụga ememme, malite n’elekere itoolu nke ụtụtụ ruo ise na mgbede. Ọpụpụ ọ bụla 15 nkeji, ikpeazụ 50 nkeji na ọnụ na A $ 250 maka ndị ala ọzọ na A $ 90 n'ihi na ndị bi na. Fọdụ Euro 15 ma ọ bụrụ na ị bụ onye mba ọzọo.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ihe ngosi, gbakọọ site na 150 A $, euro 9.
Ebe ngosi nka nke Evita
Lọ ihe ngosi nka nwere uru nke ịnọ na etiti obodo, Barrio Norte. Ikekwe ọ bụghị otu n'ime ebe ndị njem nleta na-agakarị n'ụkwụ, ndị na-agagharị na San Telmo ma ọ bụ Corrientes Street, mana ụlọ ngosi ihe nka ọ dị n’otu n’ime ebe ndị mara mma ma ọ dighi ihe di anya. N'ezie, o zuru ezu iji nweta Line D metro na ama Plaza de Mayo nke ọma wee pụọ na ọdụ ole na ole mgbe e mesịrị, na ọdụ Plaza Italia, ka ọ bụrụ ebe dịpụrụ adịpụ. Ha hapụkwara gị ọtụtụ bọs ma ọ bụ colectivos.
Ọ na-arụ ọrụ n'ime nnukwu ụlọ nke bụ ezinụlọ Buenos Aires. Ọ bụ ihe owuwu nke narị afọ nke iri abụọ, na Italiantali Neo-Renaissance nke Italian na Spanish, nke Eva Perón Foundation zụtara na 1948, ntọala nke nwunye nke President Juan Domingo Perón na-elekọta n'oge mbụ ya. Ọ bụ itlọ Na-agagharị nke ndi nwanyi na-alughi di ma obu umuaka nwere site na mba nile ịgwọ na idozi nsogbu ọrụ, ahụike ma ọ bụ nsogbu ụlọ.
Muselọ ihe ngosi nka dị na Lafinur street 2988, nzọụkwụ si Avenida Las Heras na ogige mara mma nke otu aha. Ọ dịkwa nso ebe a ma ama ịzụ ahịa, Avenida Santa Fe. Mepee site na Tuesday ruo Sunday site na 11 ruo 7 elekere ma mechie na Mọnde. Njegharị ndị a na-eduzi na-elekwasị anya na ndụ na ọrụ nke María Eva Duarte de Perón, mgbe niile na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba na ọdịbendị.
A na-elele nchịkọta na ngosipụta dị ka ihe dum ma ọ bụghị iche. Enwere akwukwo na ihe nlere na ihe ndi ozo nke Evita. Ọbịbịa si na Tuesday ruo Sunday na Spanish, Portuguese na Bekee na ikpeazụ banyere 45 nkeji. Ma ọ dịkarịa ala, otu a ga-abụrịrị mmadụ ise. Ime ụlọ niile gụnyere Braill systemhey enwere ndị ntụgharị okwu Asụsụ Ogbi. Iji debanye aha ị ga-aga na weebụsaịtị ma dejupụta ụdị.
Muselọ ihe ngosi nka nwere a Ulọ ahịa ihe ncheta jiri kaadi ozi, T-uwe, mkpọ, mma, akwụkwọ, bọlbụ di na nwunye, iko, iko nke Argentina, pensụl, mgbaaka ndị bụ isi na mmeputakwa nke ọla nwanyị nwanyị nwanyị mbụ Argentine na-eyibu. E nwekwara a ụlọ oriri na ọ restaurantụ Barụ Bar na-eje ozi nri mpaghara, ebe ezumike na patio mara mma ebe ị nwere ike iri nri ụtụtụ, nri ehihie ma ọ bụ tii.
Ebe a na-akwabata ebe ndị njem si mba ọzọ
Argentina bụ otu n'ime mba nwere mbata na ọpụpụ kachasị elu natara na kọntinentna. Ọtụtụ nde mmadụ si na Europe dum rute n'agbata narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX, ụfọdụ gbanahụ ịda ogbenye na ndị ọzọ site na agha ma ọ bụ mkpagbu okpukpe. Enwere ụmụ amaala obodo siri ike na mgbago ugwu obodo ahụ, ụmụ ụmụ amaala, na ọnụ ọgụgụ ndị kwabatara na-agbadata na Pampas mmiri na mmiri na ndịda.
The akụkọ ihe mere eme nke a mbata na ọpụpụ nwere ike hụrụ na the Immigration Museum nke na-arụ ọrụ na Old Immigrant Hotels, ihe mgbagwoju anya nke nyere nnabata mbu nye nde mmadu ndi batara obodo a. N'oge ahụ, a nabatara ndị si n'ụgbọ mmiri ahụ pụọ, enyere ha ebe obibi, na-achịkwa ahụike ha ma na-ahazi ebe obibi na ọrụ. Ndị a bụ kpọmkwem isi mmalite nke ụlọ ngosi ihe nka taa.
Emeghere ọnụ ụzọ nke ebe a na 2013, mgbe emezigharị na ọrụ na ala nke atọ nke ụlọ ochie ebe ụlọ ihi ụra na-adịbu. Enwere foto, akwụkwọ, akwụkwọ ndekọ nke ndị kwabatara na-abịa, ihe nkiri, akaebe nke oge a, ihe ncheta na ọtụtụ puku foto.. A na-agbakwunye ihe ngosi nka na-ejegharị.
Muselọ ihe ngosi nka emeghe site na Tuesday rue Sunday site na elekere iri na ano nke ututu rue nke asaa nke ehihe. Emechiri na Mọnde, otu na ezumike.
Elegantlọ a mara mma Ọ dị na ụzọ ochie mara mma, Avenida de Mayo. Ọrụ ndị ahụ malitere na 1919 na n'oge ahụ ejibu ulo kacha elu na Latin America na otu onye nke tallest mesikwuru ihe ike na uwa.
A na-akpọ ya Barolo n'ihi na onye nyere iwu onye wuru ya bụ Luis Barolo, ọtụtụ nde mmadụ na-arụpụta ọrụ ugbo nke bịara mba ahụ na 1890. O wuru ụlọ ahụ naanị iji gbazite ya na-eche na otu ụbọchị Europe ga-apụ n'anya ọtụtụ agha. Ọ masịrị Dante Alighieri so kpebiri ịbụ onye sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke na-ewu nke mbụ ya na fim.
Nsonaazụ bụ nke a mara ụlọ nwere ala 24, ala 22 na okpuru ala abụọ, na otu narị mita n’ịdị elu. Ruo mgbe njedebe nke dome ya dị mita 90 mana na 100 ọ nwere ọkụ ụlọ arụnyere na-agbagharị site na plọg 300 puku na-eme n'oge ahụ mere ka ọ pụta ìhè site na Uruguay. O nwere ma nwee ụlọ ọrụ ike ya, igwe mbugo itoolu, abụọ zoro ezo, na forklifts abụọ. Igwe nchekwa ahụ zoro ezo bụ nke Barolo ji aka ya mee iji zere ịgafe ndị ọrụ ya.
Palacio Barolo bụ ụlọ gothic, ọ bụ ịhụnanya gothic, gịnị ka ọ bụ? Na ntọala O bu ụtụ nye Chukwu Comedia na Hel, Purgatory na Paradaịs n'ihi na juputara na ntunye aka na oru, site na ya vaults, site na ọdịdị nke osisi ya, nghazi ya na kpakpando, ihe odide ya na Latin, dragons na ogige nke oriọna.
Nduzi njegharị ga-ekwe omume n'ihi Palacio Barolo Tours oru ngo: Enwere njem pụrụ iche, ehihie, abalị, iji mụta ịgba egwu tango n'ime ụlọ eze na foto. Klas tango na-efu 300 A $ (euro 18), onye ọ bụla mana 280 ma ọ bụrụ na a na-eme njem nlegharị anya nke ụlọ ahụ.
Nleta ndị a na-eme n'abalị na-akọwa nke ọma karịa nke ehihie ma ị gbagoo na laithaị iji chee obodo echiche n'abalị, drinkụọ otu iko mmanya ma detụ efere mpaghara. Ọ na-ewe ihe dị ka awa abụọ ma ọ dị n’asụsụ Spanish na Bekee. Ha na-erikwa 300 A $ onye ọ bụla. Maka otu n'ime njem nlegharị ndị a, ị ga-ede akwụkwọ na Palacio Barolo Tours.
Anọ pụrụ iche ebe nkiri na Buenos Aires nke na-eme ka isi obodo America a bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma na nka a na ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Buenos Aires » Umslọ ihe ngosi nka anọ dị na Buenos Aires
10 nke ebe kachasị mma na Galicia